Guardiola oo wacad ku maray in uu dullaan ku qaadi doono Manchester United iyo Jose Mourinho – Gool FM
Guardiola oo wacad ku maray in uu dullaan ku qaadi doono Manchester United iyo Jose Mourinho
Kaafi September 9, 2016
(Manchester) 09 sebt 2016. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola waxa uu wacad ku maray in uu weerari doono Mancehster United iyo Jose Mourinho marka ay dib u curiyaan xifaaltankoodii kulanka ka dhacaya berry gegida Old Trafford.
Marka laga yimaado in labada dhinacba ayey ku jiraan qeybihii hore ee maamuladooda ugubka ah hadana 100% ayuu ahaa natiijooyinkii ay heleen saddexddii kulan ee ugu horreeyey Premier League.
Guardiola waxa uu calaamadiyey horumaro ayey United dhinaca bandhiga ka sameeneysay kulanba kii ka dambeeyey saddexdii ee ay dheeshay balse waxa uu xaqiijiyey in City aysan badali doonin qaab ciyaareedkeedii cajiibka ahaa ee ay kala hor tagtay Steaua Bucharest iyo Stoke City.
“Waxaan rabaa in aan weerar qaado, xakameeyo kulanka, aan ogolaano in dama maryeenada ugu yar nalala beegsado,” ayuu yiri Guardiola. “Waan ognahay in aan berry dheeli doono – waana ognahay in aan la ciyaari doono koox aad u wanaagan.
“Waxaan isku dayyi doonaa oo aan sameeyn doonaa waxyaabaha aan ku wanaagsannahay. Si fiica ayaan mararka qaar u dheelnay, gaar ahaan kulankii Bukharest iyo qeybtii hore West Ham,” ayuu ku daray isaga oo ula jeeda guushii 3-1 ahayd.
“Iyo Stke waxaan ogaaday durbadiiba sida uu Premier league ugu adagyahay.
“Dhinaca Jose waa isla sidaas. Waxa uu u baahan yahay waqti. Waxaan u baahannahay waqti laakiin dunida ku siin meyso. Waa sida ay hada tahay, hada kulan ayaa ka dhici doona Old Trafford.
“Waxa ay ku xiran tahay sida aan u dheelno. Waxaan ogahay hada ilaa iyo maalinta ugu dambeeysay waayahayga in aad u baahan tahay u ciyaarida si wanaagsan si aad guul kulan uga gaarto.
“Waan arkay kulamadii rasmiga ahaa ee United, ciyaar kasta si ka wanaagsan tii hore ayey u dheelayeen. Sideena oo kale. Taas waa caadi, dabcan, waxa ay leeyihiin hibo aad u badan.
“Anthony Martial waa mid aad u dheereeya, Juan Mata meelaha ban banaan halis ayuu ku yahay. Tayada Weyne Rooney; shaki kuma jiro tayada Zlatan Ibrahimovic. Waa koox heer sare ah, sida Manchester United ay waligeed tahay.”
Mourinho oo weeraray masuuliyiinta Manchester United kahor kulanka berri
Tababare Jose Mourinho oo ka hadlay maqnaanshiyaha Sergio Aguero ee kulanka Manchester Derby
Mourinho oo xaqiijiyey in Henrikh Mkhitaryan uu taam u yahay kulanka Manchester Derby